ဗီလာရီးယဲလျကို ယူနိုကျတကျ ဘာကွောငျ့အနိုငျမကစားနိုငျခဲ့တာလဲ – the One Sports Journal
ဗီလာရီးယဲလျကို ယူနိုကျတကျ ဘာကွောငျ့အနိုငျမကစားနိုငျခဲ့တာလဲ
ဒီနမေ့နကျပိုငျးက မနျခကျြစတာယူနိုကျတကျနဲ့ ဗီလာရီးယဲလျတို့ရဲ့ ယူရိုပါလိဂျဗိုလျလုပှဲကို အိပျရေးပကျြခံပွီးစောငျ့ကွညျ့ခဲ့တယျ။ ကိုယျတိုငျက ယူနိုကျတကျပရိသတျတဈဦးဖွဈပမေယျ့ ဆိုးလျရှားကို သိပျမယုံတာကွောငျ့ ပှဲမတိုငျခငျကတညျးက ဖလားရဖုိ့သိပျမမြှျောလငျ့ခဲ့ပမေယျ့ ဗိုလျလုပှဲအဆငျ့ကို မရောကျတာလညျးကွာပွီ၊
နောကျ ကံလေးကောငျးပွီးတော့မြား ဖလားတဈလုံးလောကျ ရမလားဆိုတဲ့စိတျနဲ့တော့ မြှျောလငျ့ခကျြခပျပါးပါးလေးထားခဲ့တယျ။
နောကျတဈခုကလညျး လာလီဂါကလပျတှေ ခွမောတာနဲ့ ယူရိုပါလိဂျဖလားဆိုရငျ မကျြစိမှိတျပွီးတော့ တဈလုံးပွီးတဈလုံးယူနတေဲ့ နညျးပွအမျမရီကွောငျ့ ယူနိုကျတကျကို အနိုငျရလောကျတဲ့အထိ သိပျမမြှျောလငျ့ခဲ့တာလညျးပါတယျ။
ဒါပမေဲ့ ပှဲကိုကွညျ့နရေငျးကနေ စိတျထဲမှာ ဗီလာရီးယဲလျက ဒီလောကျအထိ အဆိပျရှိတဲ့အသငျးမြိုးမဟုတျဘဲ၊ အမွငျသာဆုံးနှိုငျးယှဉျပွရရငျ အဲဗာတနျလောကျပဲ အဆငျ့ရှိတယျလို့တောငျ တှေးမိလာတယျ။
ခံစဈမှာထိုငျကစား၊ Counter တှနေဲ့ ပွနျဖောကျတာတှကေ အခုနောကျပိုငျး ပရီးမီးယားလိဂျအလယျအလတျအသငျးတှေ အမြားဆုံးကစားကွတာပဲ။
ဒါပမေဲ့ ကှာခွားသှားတာက ဗီလာရီးယဲလျဟာ ခံစဈကို နညျးဗြူဟာမွောကျကစားနိုငျတာရယျ၊
ယူရိုပါလိဂျနဲ့ကံစပျတဲ့ အမျမရီရှိနတောရယျကွောငျ့သာ ဖလားရသှားတာပဲဖွဈပါတယျ။
အပျေါမှာ ပွောခဲ့သလို လာလီဂါကလပျတှဟော ခွမောတယျ၊ ဗီလာရီးယဲလျအသငျးမှာလညျး ဘကျကာ၊ အယျလျကာဆာတို့လို အဆငျ့တဈခုရှိတဲ့ကစားသမားတှရှေိနတောကွောငျ့ အထငျကွီးမိခဲ့ပမေယျ့ ခွစှေမျးပိုငျးနဲ့ တဈဦးခငျြးပိုငျးတှကေ ဒီလောကျ အကောငျးကွီးမဟုတျခဲ့ဘူး။
စိတျထဲမှာ မခံခြိမခံသာဖွဈရတာက ဒီလိုအသငျးမြိုးကို ယူနိုကျတကျ အနိုငျမကစားနိုငျခဲ့တာကိုပဲ။
မနှဈက ယူရိုပါလိဂျဆီမီးဖိုငျနယျမှာ ယူနိုကျတကျတို့ ဆီဗီလာကို ရှုံးတယျ၊ ဆီဗီလာရဲ့ ကစားအားအရလညျး ယူနိုကျတကျရှုံးသငျ့တယျ။
အခု ဗီလာရီးယဲလျအသငျးက ဆီဗီလာလောကျတောငျခွစှေမျးမရှိဘဲ ရှုံးခဲ့တာကတော့ ယူနိုကျတကျအသငျးကိုရော နညျးပွဆိုးလျရှားကိုပါ သိပျအစာမကွစေရာပဲ။
ဗီလာရီးယဲလျက ခံစဈကို ပိတျဆော့ပွီး Counter နဲ့ ပွနျတိုကျတယျဆိုပမေယျ့ သူတို့ Counter တှကေ အရမျးကွီးထိရောကျတဲ့အနအေထားမှာ မရှိခဲ့ဘူး။
တဈခုပဲ ဗီလာရီးယဲလျရဲ့ Set Piece တှကေ ယူနိုကျတကျကို ခွိမျးခွောကျနိုငျခဲ့ပွီး ယူနိုကျတကျခံစဈကလညျး Set Piece တှဆေိုရငျ ကာကှယျနိုငျမှုက အရမျးကောငျးတော့ ဂိုးတှလှေယျလှယျကူကူပေးနရေတာကို ဒီရာသီမှာ ခဏခဏမွငျခဲ့ရတယျ။
ပှဲကွညျ့နရေငျးနဲ့ ဗီလာရီးယဲလျဟာ Open Play ကနေ ဂိုးရဖို့မရှိဘူးဆိုတာမွငျလာတယျ၊
ဒါပမေဲ့ ယူနိုကျတကျကစားသမားတှေ ရူးကွောငျကွောငျနဲ့ ကိုယျ့ဂိုးဧရိယာနားမှာ ပွဈဒဏျမလုပျဖို့ပဲ ထိုငျဆုတောငျးနရေတယျ။
ဗီလာရီးယဲလျရတဲ့ ဂိုးကလညျး ပါရဟေိုကို ကာဗာနီ မလိုအပျဘဲပွဈဒဏျလုပျခဲ့တာကနေ စခဲ့တာဖွဈပွီး Dead Ball Specialist ပါရဟေိုရဲ့ ဖွတျတငျဘောကို မျောရီနိုက ပိတျသှငျးခဲ့တာပါပဲ။
ယူနိုကျတကျခံစဈမှာ မကျဂှိုငျးယားပဲဖွဈဖွဈ၊ လငျဒီလော့ဖျနဲ့ ဘာယီပဲဖွဈဖွဈ Set Piece တှကေို ကာကှယျနိုငျမှုက အရမျးညံ့လှနျးပွီး ဘောကွောမနပျတာနဲ့ ဘယျသူ့ကို Marking လုပျရမလဲဆိုတာ တှကျခကျြမှုအားနညျးလှနျးတယျ။
တဈခြိနျက ဖာဒီနနျ+ဗီဒဈအတှဲကိုတောငျ ပွနျသတိရမိပါသေးတယျ။
အခု ပေးလိုကျရတဲ့ဂိုးကလညျး လငျဒီလော့ဖျနဲ့ ဘာယီကွားကနေ မျောရီနို ဖွတျပေးပိတျသှငျးခဲ့တာဖွဈပွီး လငျဒီလော့ဖျ ဖိဖိစီးစီး Marking မလုပျထားလို့ပေးလိုကျရတယျလို့ပဲမွငျမိတယျ။
ဗီလာရီးယဲလျနဲ့ပှဲမှာ ယူနိုကျတကျ ဘာလို့ရှုံးခဲ့တာလဲလို့ မေးလာခဲ့ရငျ ကိုယျတိုငျအမွငျကတော့ ပှဲကိုအပွောငျးအလဲလုပျနိုငျစှမျးရှိတဲ့ အရနျကစားသမားစုဖှဲ့မှုမရှိတာနဲ့ ဆိုးလျရှားဟာ ဖလားရနိုငျလောကျတဲ့အထိ ကံမပါတဲ့နညျးပွဖွဈနတောကွောငျ့လို့ပဲ ပွောခငျြတယျ။
ပှဲကို အပွောငျးအလဲလုပျနိုငျစှမျးမရှိတဲ့ အရနျကစားသမားတှေ မရှိဘူးလို့ပွောရတာက (၁)ဂိုးစီသရကေနြတေဲ့အခြိနျမှာ ဗီလာရီးယဲလျက လုံးဝခံစဈသကျသကျဖွဈနပွေီ၊
အဲဒီအခြိနျမှာ ယူနိုကျတကျ သခြောပေါကျတိုကျစဈမွှငျ့ရတော့မယျ။ Counter မိလို့ ဂိုးပေးလိုကျရရငျတော့လညျး မတတျနိုငျဘူးပေ့ါ။
ဒါပမေဲ့ ဗီလာရီးယဲလျက ခံစဈသာကောငျးတာ၊ Open Playနဲ့ Counter Attacking တှကေ ဒီလောကျအထိကောငျးနတောမဟုတျလို့ ယူနိုကျတကျတိုကျစဈမှာအပွောငျးအလဲလုပျနိုငျရငျ ဂိုးရဖို့ရာနှုနျးမြားတယျ။
အဲဒီအခြိနျမှာ အရနျခုံမှာရှိနတောက မာတာ၊ ဗနျဒီဘိချ၊ ဖရကျဒျ၊ ဒီယာလို၊ ဒနျနီယဲလျဂြိမျးဈ။
ဒီကစားသမားတှထေဲမှာ ပှဲအလှညျ့အပွောငျးကို ဖနျတီးနိုငျစှမျးရှိတဲ့သူ တဈယောကျမှ မရှိဘူးလို့ပဲ ပွတျပွတျသားသားပွောခငျြပါတယျ။
ဒီကစားသမားတှရေဲ့စှမျးဆောငျရညျက သာမနျအတိုငျးပဲဆိုတာ လိဈဒျ၊ လကျစတာပှဲတှမှောသာမက တခွားပှဲတှမှောလညျး မွငျတှခေဲ့ရပွီးဖွဈလို့ပါပဲ။
ကိုယျတိုငျလညျး ဆိုးလျရှားနရောမှာဆိုရငျ လူစားလဲဖို့ တှဝေကေောငျးတှဝေမေိမှာအမှနျပဲ။
ဒါပမေဲ့ တဈခုရှိတာကတော့ ယူနိုကျတကျကစားသမားတှေ ကုနျနတေဲ့အခြိနျမှာ မဖွဈမနလေူစားလဲမှုတှေ မလုပျခဲ့တာကတော့ ဆိုးလျရှားကို ဝဖေနျခငျြစရာကောငျးတယျ။
ပေ့ါဘာ ကုနျနပွေီ၊ ရပျရျှဖို့ဒျ မလှုပျနိုငျတော့ဘူး၊ ဘရူနိုကလညျး မိနဈ(၁၂၀)လုံး ဘာမှကိုမလုပျနိုငျ၊ တှမျမီနေးလညျး ရှတေ့ကျလိုကျ၊ နောကျဆငျးလိုကျနဲ့ သလေုမတတျကစားနရေလို့ သူလညျး ပွိုငျးနပွေီ။
အဲဒါကို မွငျမွငျကွီးနဲ့ မိနဈ(၁၂၀)နီးပါး ဒီ(၁၁)ယောကျနဲ့ကစားသှားတာကတော့ မဖွဈသငျ့ဘူး။
ဆိုးလျရှားကိုယျတိုငျကလညျး အခြိနျပိုမှာ ဂိုးရဖို့ထကျ ပယျနယျတီကနျဖို့ကိုပဲ အာရုံစိုကျသှားတာသိသာတယျ။
နောကျတဈခကျြဖွဈတဲ့ ဆိုးလျရှားဟာ ဖလားတှရေဖို့ ကံမပါလာဘူးဆိုတာကတော့ အရမျးရှငျးပါတယျ။
ဆိုးလျရှားရဲ့အမွငျ့ဆုံးစှမျးဆောငျရညျက ဒီလို ဗိုလျလုပှဲတှရေောကျတာ၊ ဆီမီးဖိုငျနယျရောကျတာတှပေဲဖွဈပွီး အဲဒီထကျပိုမြှျောလငျ့လို့မရဘူး။
တခြို့နညျးပွတှဟော ဖလားရဖို့ဖွဈတညျလာသလို၊ တခြို့နညျးပွတှကေတော့ ဆုဖလားတှကေို စိနျချေါနိုငျရုံသကျသကျသာဖွဈတညျလာတာလို့ တဈခြိနျက ကိုယျ့ရဲ့စီနီယာတဈယောကျပွောခဲ့ဖူးတာကို အမှတျရမိပါတယျ။
ဆိုးလျရှားဟာ ဆုဖလားတှကေို စိနျချေါနိုငျရုံ၊ အမှတျပေးဇယားမှာ အဆငျ့(၂)လောကျရယူနိုငျတဲ့အဆငျ့ပဲရှိတယျ၊ ဖလားရလောကျတဲ့အထိ အရညျအသှေးမရှိဘူး။
ဆီဗီလာနဲ့ယူရိုပါလိဂျဖလားရတာကို ထညျ့မတှကျရငျတောငျ အာဆငျနယျလို အဖကျဖကျက ယိုယှငျးနတေဲ့အသငျးမြိုးကို ယူရိုပါလိဂျဗိုလျလုပှဲပို့ပေးတယျ၊
အခု ဗီလာရီးယဲလျလိုမြိုး သာမနျအလယျအလတျအသငျးကို ခနျြပီယံဖွဈအောငျလုပျပွနိုငျခဲ့တယျ။
တကယျလို့ ယူနိုကျတကျအသငျး ဖလားအောငျမွငျမှုတှရေယူခငျြတယျဆိုရငျတော့ နညျးပွနရော အပွောငျးအလဲလုပျသငျ့နပွေီလို့ထငျတယျ။
အရငျက ထိပျတနျးအဆငျ့နညျးပွတှေ ဈေးကှကျထဲမှာ သိပျမရှိပမေယျ့ အခုအခြိနျမှာတော့ ဇီဒနျး၊ ကှနျတီတို့လို နညျးပွတှဟော သူတို့ကလပျတှနေဲ့ လမျးခှဲခဲ့ပွီးဖွဈတာကွောငျ့ အခုအခြိနျဟာ ယူနိုကျတကျအသငျး နညျးပွအပွောငျးအလဲလုပျဖို့ အကောငျးဆုံးအခြိနျပါပဲ။
တဈခြိနျတုနျးက ဇီဒနျးကို ကွိုးပမျးခဲ့ပမေယျ့ ဆိုးလျရှားအပျေါ ယုံကွညျမှုပိုခဲ့လို့ လကျလြှော့ခဲ့တာမြိုး အခုအခြိနျမှာ ထပျလုပျရငျတော့ ကိုယျ့ထိုကျနဲ့ကိုယျ့ကံပဲလို့ပဲပွောရတော့မှာပါပဲ .
ဗီလာရီးယဲလ်ကို ယူနိုက်တက် ဘာကြောင့်အနိုင်မကစားနိုင်ခဲ့တာလဲ
ဒီနေ့မနက်ပိုင်းက မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်နဲ့ ဗီလာရီးယဲလ်တို့ရဲ့ ယူရိုပါလိဂ်ဗိုလ်လုပွဲကို အိပ်ရေးပျက်ခံပြီးစောင့်ကြည့်ခဲ့တယ်။ ကိုယ်တိုင်က ယူနိုက်တက်ပရိသတ်တစ်ဦးဖြစ်ပေမယ့် ဆိုးလ်ရှားကို သိပ်မယုံတာကြောင့် ပွဲမတိုင်ခင်ကတည်းက ဖလားရဖုိ့သိပ်မမျှော်လင့်ခဲ့ပေမယ့် ဗိုလ်လုပွဲအဆင့်ကို မရောက်တာလည်းကြာပြီ၊
နောက် ကံလေးကောင်းပြီးတော့များ ဖလားတစ်လုံးလောက် ရမလားဆိုတဲ့စိတ်နဲ့တော့ မျှော်လင့်ချက်ခပ်ပါးပါးလေးထားခဲ့တယ်။
နောက်တစ်ခုကလည်း လာလီဂါကလပ်တွေ ခြေမာတာနဲ့ ယူရိုပါလိဂ်ဖလားဆိုရင် မျက်စိမှိတ်ပြီးတော့ တစ်လုံးပြီးတစ်လုံးယူနေတဲ့ နည်းပြအမ်မရီကြောင့် ယူနိုက်တက်ကို အနိုင်ရလောက်တဲ့အထိ သိပ်မမျှော်လင့်ခဲ့တာလည်းပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ပွဲကိုကြည့်နေရင်းကနေ စိတ်ထဲမှာ ဗီလာရီးယဲလ်က ဒီလောက်အထိ အဆိပ်ရှိတဲ့အသင်းမျိုးမဟုတ်ဘဲ၊ အမြင်သာဆုံးနှိုင်းယှဉ်ပြရရင် အဲဗာတန်လောက်ပဲ အဆင့်ရှိတယ်လို့တောင် တွေးမိလာတယ်။
ခံစစ်မှာထိုင်ကစား၊ Counter တွေနဲ့ ပြန်ဖောက်တာတွေက အခုနောက်ပိုင်း ပရီးမီးယားလိဂ်အလယ်အလတ်အသင်းတွေ အများဆုံးကစားကြတာပဲ။
ဒါပေမဲ့ ကွာခြားသွားတာက ဗီလာရီးယဲလ်ဟာ ခံစစ်ကို နည်းဗျူဟာမြောက်ကစားနိုင်တာရယ်၊
ယူရိုပါလိဂ်နဲ့ကံစပ်တဲ့ အမ်မရီရှိနေတာရယ်ကြောင့်သာ ဖလားရသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
အပေါ်မှာ ပြောခဲ့သလို လာလီဂါကလပ်တွေဟာ ခြေမာတယ်၊ ဗီလာရီးယဲလ်အသင်းမှာလည်း ဘက်ကာ၊ အယ်လ်ကာဆာတို့လို အဆင့်တစ်ခုရှိတဲ့ကစားသမားတွေရှိနေတာကြောင့် အထင်ကြီးမိခဲ့ပေမယ့် ခြေစွမ်းပိုင်းနဲ့ တစ်ဦးချင်းပိုင်းတွေက ဒီလောက် အကောင်းကြီးမဟုတ်ခဲ့ဘူး။
စိတ်ထဲမှာ မခံချိမခံသာဖြစ်ရတာက ဒီလိုအသင်းမျိုးကို ယူနိုက်တက် အနိုင်မကစားနိုင်ခဲ့တာကိုပဲ။
မနှစ်က ယူရိုပါလိဂ်ဆီမီးဖိုင်နယ်မှာ ယူနိုက်တက်တို့ ဆီဗီလာကို ရှုံးတယ်၊ ဆီဗီလာရဲ့ ကစားအားအရလည်း ယူနိုက်တက်ရှုံးသင့်တယ်။
အခု ဗီလာရီးယဲလ်အသင်းက ဆီဗီလာလောက်တောင်ခြေစွမ်းမရှိဘဲ ရှုံးခဲ့တာကတော့ ယူနိုက်တက်အသင်းကိုရော နည်းပြဆိုးလ်ရှားကိုပါ သိပ်အစာမကြေစရာပဲ။
ဗီလာရီးယဲလ်က ခံစစ်ကို ပိတ်ဆော့ပြီး Counter နဲ့ ပြန်တိုက်တယ်ဆိုပေမယ့် သူတို့ Counter တွေက အရမ်းကြီးထိရောက်တဲ့အနေအထားမှာ မရှိခဲ့ဘူး။
တစ်ခုပဲ ဗီလာရီးယဲလ်ရဲ့ Set Piece တွေက ယူနိုက်တက်ကို ခြိမ်းခြောက်နိုင်ခဲ့ပြီး ယူနိုက်တက်ခံစစ်ကလည်း Set Piece တွေဆိုရင် ကာကွယ်နိုင်မှုက အရမ်းကောင်းတော့ ဂိုးတွေလွယ်လွယ်ကူကူပေးနေရတာကို ဒီရာသီမှာ ခဏခဏမြင်ခဲ့ရတယ်။
ပွဲကြည့်နေရင်းနဲ့ ဗီလာရီးယဲလ်ဟာ Open Play ကနေ ဂိုးရဖို့မရှိဘူးဆိုတာမြင်လာတယ်၊
ဒါပေမဲ့ ယူနိုက်တက်ကစားသမားတွေ ရူးကြောင်ကြောင်နဲ့ ကိုယ့်ဂိုးဧရိယာနားမှာ ပြစ်ဒဏ်မလုပ်ဖို့ပဲ ထိုင်ဆုတောင်းနေရတယ်။
ဗီလာရီးယဲလ်ရတဲ့ ဂိုးကလည်း ပါရေဟိုကို ကာဗာနီ မလိုအပ်ဘဲပြစ်ဒဏ်လုပ်ခဲ့တာကနေ စခဲ့တာဖြစ်ပြီး Dead Ball Specialist ပါရေဟိုရဲ့ ဖြတ်တင်ဘောကို မော်ရီနိုက ပိတ်သွင်းခဲ့တာပါပဲ။
ယူနိုက်တက်ခံစစ်မှာ မက်ဂွိုင်းယားပဲဖြစ်ဖြစ်၊ လင်ဒီလော့ဖ်နဲ့ ဘာယီပဲဖြစ်ဖြစ် Set Piece တွေကို ကာကွယ်နိုင်မှုက အရမ်းညံ့လွန်းပြီး ဘောကြောမနပ်တာနဲ့ ဘယ်သူ့ကို Marking လုပ်ရမလဲဆိုတာ တွက်ချက်မှုအားနည်းလွန်းတယ်။
တစ်ချိန်က ဖာဒီနန်+ဗီဒစ်အတွဲကိုတောင် ပြန်သတိရမိပါသေးတယ်။
အခု ပေးလိုက်ရတဲ့ဂိုးကလည်း လင်ဒီလော့ဖ်နဲ့ ဘာယီကြားကနေ မော်ရီနို ဖြတ်ပေးပိတ်သွင်းခဲ့တာဖြစ်ပြီး လင်ဒီလော့ဖ် ဖိဖိစီးစီး Marking မလုပ်ထားလို့ပေးလိုက်ရတယ်လို့ပဲမြင်မိတယ်။
ဗီလာရီးယဲလ်နဲ့ပွဲမှာ ယူနိုက်တက် ဘာလို့ရှုံးခဲ့တာလဲလို့ မေးလာခဲ့ရင် ကိုယ်တိုင်အမြင်ကတော့ ပွဲကိုအပြောင်းအလဲလုပ်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့ အရန်ကစားသမားစုဖွဲ့မှုမရှိတာနဲ့ ဆိုးလ်ရှားဟာ ဖလားရနိုင်လောက်တဲ့အထိ ကံမပါတဲ့နည်းပြဖြစ်နေတာကြောင့်လို့ပဲ ပြောချင်တယ်။
ပွဲကို အပြောင်းအလဲလုပ်နိုင်စွမ်းမရှိတဲ့ အရန်ကစားသမားတွေ မရှိဘူးလို့ပြောရတာက (၁)ဂိုးစီသရေကျနေတဲ့အချိန်မှာ ဗီလာရီးယဲလ်က လုံးဝခံစစ်သက်သက်ဖြစ်နေပြီ၊
အဲဒီအချိန်မှာ ယူနိုက်တက် သေချာပေါက်တိုက်စစ်မြှင့်ရတော့မယ်။ Counter မိလို့ ဂိုးပေးလိုက်ရရင်တော့လည်း မတတ်နိုင်ဘူးပေ့ါ။
ဒါပေမဲ့ ဗီလာရီးယဲလ်က ခံစစ်သာကောင်းတာ၊ Open Playနဲ့ Counter Attacking တွေက ဒီလောက်အထိကောင်းနေတာမဟုတ်လို့ ယူနိုက်တက်တိုက်စစ်မှာအပြောင်းအလဲလုပ်နိုင်ရင် ဂိုးရဖို့ရာနှုန်းများတယ်။
အဲဒီအချိန်မှာ အရန်ခုံမှာရှိနေတာက မာတာ၊ ဗန်ဒီဘိခ်၊ ဖရက်ဒ်၊ ဒီယာလို၊ ဒန်နီယဲလ်ဂျိမ်းစ်။
ဒီကစားသမားတွေထဲမှာ ပွဲအလှည့်အပြောင်းကို ဖန်တီးနိုင်စွမ်းရှိတဲ့သူ တစ်ယောက်မှ မရှိဘူးလို့ပဲ ပြတ်ပြတ်သားသားပြောချင်ပါတယ်။
ဒီကစားသမားတွေရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်က သာမန်အတိုင်းပဲဆိုတာ လိစ်ဒ်၊ လက်စတာပွဲတွေမှာသာမက တခြားပွဲတွေမှာလည်း မြင်တွေ့ခဲ့ရပြီးဖြစ်လို့ပါပဲ။
ကိုယ်တိုင်လည်း ဆိုးလ်ရှားနေရာမှာဆိုရင် လူစားလဲဖို့ တွေဝေကောင်းတွေဝေမိမှာအမှန်ပဲ။
ဒါပေမဲ့ တစ်ခုရှိတာကတော့ ယူနိုက်တက်ကစားသမားတွေ ကုန်နေတဲ့အချိန်မှာ မဖြစ်မနေလူစားလဲမှုတွေ မလုပ်ခဲ့တာကတော့ ဆိုးလ်ရှားကို ဝေဖန်ချင်စရာကောင်းတယ်။
ပေ့ါဘာ ကုန်နေပြီ၊ ရပ်ရ်ှဖို့ဒ် မလှုပ်နိုင်တော့ဘူး၊ ဘရူနိုကလည်း မိနစ်(၁၂၀)လုံး ဘာမှကိုမလုပ်နိုင်၊ တွမ်မီနေးလည်း ရှေ့တက်လိုက်၊ နောက်ဆင်းလိုက်နဲ့ သေလုမတတ်ကစားနေရလို့ သူလည်း ပြိုင်းနေပြီ။
အဲဒါကို မြင်မြင်ကြီးနဲ့ မိနစ်(၁၂၀)နီးပါး ဒီ(၁၁)ယောက်နဲ့ကစားသွားတာကတော့ မဖြစ်သင့်ဘူး။
ဆိုးလ်ရှားကိုယ်တိုင်ကလည်း အချိန်ပိုမှာ ဂိုးရဖို့ထက် ပယ်နယ်တီကန်ဖို့ကိုပဲ အာရုံစိုက်သွားတာသိသာတယ်။
နောက်တစ်ချက်ဖြစ်တဲ့ ဆိုးလ်ရှားဟာ ဖလားတွေရဖို့ ကံမပါလာဘူးဆိုတာကတော့ အရမ်းရှင်းပါတယ်။
ဆိုးလ်ရှားရဲ့အမြင့်ဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်က ဒီလို ဗိုလ်လုပွဲတွေရောက်တာ၊ ဆီမီးဖိုင်နယ်ရောက်တာတွေပဲဖြစ်ပြီး အဲဒီထက်ပိုမျှော်လင့်လို့မရဘူး။
တချို့နည်းပြတွေဟာ ဖလားရဖို့ဖြစ်တည်လာသလို၊ တချို့နည်းပြတွေကတော့ ဆုဖလားတွေကို စိန်ခေါ်နိုင်ရုံသက်သက်သာဖြစ်တည်လာတာလို့ တစ်ချိန်က ကိုယ့်ရဲ့စီနီယာတစ်ယောက်ပြောခဲ့ဖူးတာကို အမှတ်ရမိပါတယ်။
ဆိုးလ်ရှားဟာ ဆုဖလားတွေကို စိန်ခေါ်နိုင်ရုံ၊ အမှတ်ပေးဇယားမှာ အဆင့်(၂)လောက်ရယူနိုင်တဲ့အဆင့်ပဲရှိတယ်၊ ဖလားရလောက်တဲ့အထိ အရည်အသွေးမရှိဘူး။
ဆီဗီလာနဲ့ယူရိုပါလိဂ်ဖလားရတာကို ထည့်မတွက်ရင်တောင် အာဆင်နယ်လို အဖက်ဖက်က ယိုယွင်းနေတဲ့အသင်းမျိုးကို ယူရိုပါလိဂ်ဗိုလ်လုပွဲပို့ပေးတယ်၊
အခု ဗီလာရီးယဲလ်လိုမျိုး သာမန်အလယ်အလတ်အသင်းကို ချန်ပီယံဖြစ်အောင်လုပ်ပြနိုင်ခဲ့တယ်။
တကယ်လို့ ယူနိုက်တက်အသင်း ဖလားအောင်မြင်မှုတွေရယူချင်တယ်ဆိုရင်တော့ နည်းပြနေရာ အပြောင်းအလဲလုပ်သင့်နေပြီလို့ထင်တယ်။
အရင်က ထိပ်တန်းအဆင့်နည်းပြတွေ ဈေးကွက်ထဲမှာ သိပ်မရှိပေမယ့် အခုအချိန်မှာတော့ ဇီဒန်း၊ ကွန်တီတို့လို နည်းပြတွေဟာ သူတို့ကလပ်တွေနဲ့ လမ်းခွဲခဲ့ပြီးဖြစ်တာကြောင့် အခုအချိန်ဟာ ယူနိုက်တက်အသင်း နည်းပြအပြောင်းအလဲလုပ်ဖို့ အကောင်းဆုံးအချိန်ပါပဲ။
တစ်ချိန်တုန်းက ဇီဒန်းကို ကြိုးပမ်းခဲ့ပေမယ့် ဆိုးလ်ရှားအပေါ် ယုံကြည်မှုပိုခဲ့လို့ လက်လျှော့ခဲ့တာမျိုး အခုအချိန်မှာ ထပ်လုပ်ရင်တော့ ကိုယ့်ထိုက်နဲ့ကိုယ့်ကံပဲလို့ပဲပြောရတော့မှာပါပဲ .
မကျဆီ ဘာစီလိုနာနဲ့ စာခြုပျသဈခြုပျဆိုဖို့ သဘောတူလိုကျပွီလား…